Nchịkọta nsonaazụ nke usoro Coff iji nye Beer na kọfị-News-Ningbo COFF Machinery Co., ltd
Dị ka kọfị hụrụ, M hụrụ n'anya na usoro nke brewing a iko kọfị na dị ka na brewing biya. Ejiri m oge dị ukwuu na-elele usoro ndị na-eme biya si esi esi kọfị. Yabụ maka ndị nwere mmasi, m na-amalite ụzọ m.
Rlọ ụlọ mmanụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ 1BBL
Elektrik ike gbaa ụka unitank
Emechara m nwee ọtụtụ mmejọ na usoro ahụ, lee, enwere m obi ụtọ isoro gị niile kerịta.
Ajụjụ: M gbakwunyere kọfị n'oge esi mmiri.
Azịza: Ọ dị njọ, kọfị nwere ọtụtụ mmanụ na ya nke nwere ike imetụta njigide isi ma ọ bụrụ na tinye ya na mmiri ọkụ.
Ajụjụ: Enwere m ike ịnwale kọfị dị ọkụ dịka ọdịnaya mmanụ ga-adị obere?
Azịza: Nri kọfị anaghị atọ ụtọ nke ọma ebe ọ bụ na kọfị agaghị eme ka ọ bụrụ nke ọma mgbe etinyere na biya.
Ajụjụ: Kedu ihe dị iche na agwa akọrọ na kọfị a groundụ?
Azịza: kọfị gbara gburugburu nwere imi kọfị nke na-ata ahụhụ nke ukwuu mana ekpomeekpo kọfị na-enwu gbaa. Akọrọ agwa bụ ndị na-abụghị, ndị isi ahụ siri ike na a mkpụrụ Punch, ma e nwere obere jupụta kọfị ekpomeekpo.
Enwere m obi ụtọ ịmekọrịta ebe a na-eme biya biya, ma nwalee ụzọ dị iche iche nke kọfị kọfị na biya dị iche iche. Aga m ekwu maka oge dị iche iche biya biya nex oge. Kedu ihe bụ echiche gị? Kekọrịta m ahụmịhe gị otu esi eme ka esi dị iche iche site na aaron@nbcoff.com, aga m aza gị ozugbo.
Previous: Aụ biya biya na kọfị kọfị
Ọzọ: Omenala Uru Uru Ndị Ọrụ na Ndị Ahịa